Baiboly pejy 657 - Ny Baiboly
Voalohany < 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 Manaraka Farany
Romana toko 16 (tohiny)
10Veloma any amin'i Apela, mpanompo mahatokin'ny Kristy. Veloma any amin'i Aristobola mianakavy. 11Veloma any amin'i Herodiòna havako. Veloma any amin'i Narsisy mianakavy, izay ao amin'ny Tompo. 12Veloma any amin'i Trifemo sy Trifaozy, izay miasa ao amin'ny Tompo. Veloma any amin'i Persida malala, izay miasa fatratra ao amin'ny Tompo. 13Veloma any amin'i Rofosa olo-malaza ao amin'ny Tompo, sy any amin-dreniny izay reniko koa. 14Veloma any amin'i Asinkrito, Felgòna, Hermesy, Patrobosa, Hermasy, mbamin'ny rahalahy ao aminy. 15Veloma any amin'i Filologo sy Jolia, ary Nerea mianadahy, sy Olimpia, mbamin'ny olo-masina rehetra ao aminy. 16Mifampiarahabà amin'ny fanorohana masina. Manao veloma anareo ny Egizin'ny Kristy rehetra.
25Ary ho an'ilay mahay mankahery anareo araka ny Evanjeliko, izay nitoriana an'i Jesoa-Kristy sy nanambarana ny zava-miafina tsy voalaza hatrizay hatrizay, 26(fa voaseho ankehitriny tamin'ny soratry ny mpaminany, araka ny didin'ny Andriamanitra mandrakizay, ka nampahafantarina ny firenena rehetra mba hanekeny ny finoana) 27dia ho an'Andriamanitra, ilay hany hendry anie, ny voninahitra mandrakizay mandrakizay, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy. Amena.
26Jereo ange, ry rahalahy, izato hianareo voaantso e: tsy firy no hendry araka ny nofo, tsy firy no mahery, tsy firy no avo razana! 27fa izay ataon'izao tontolo izao ho adala no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny hendry; izay ataon'izao tontolo izao ho malemy no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery; 28ary izay iva razana amana faneso amin'izao tontolo izao, dia ny atao ho tsy mizy aza, no nofidin'Andriamanitra hahatsinontsinona ny misy, 29mba tsy hisy nofo hirehareha eo anatrehan'Andriamanitra. 30Fa avy aminy no maha-ao amin'ny Kristy Jesoa anareo, dia ilay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana ary fahamasinana amam-panavotana ho antsika, 31mba ho tanteraka ny voasoratra hoe: Izay mirehareha, aoka ny Tompo no ho reharehany.
1Fony aho tonga tany aminareo koa, ry rahalahy, dia tsy mba tamin-teny ambony, na tamim-pahendrena no nitoriako ny Evanjelin'Andriamanitra taminareo.
Pejy: Voalohany < 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 1.0797 seconds